Tenisy – Mada Jeunes : nanao pao-droa i Tsantaniony | NewsMada
Tenisy – Mada Jeunes : nanao pao-droa i Tsantaniony
Tontosa ny alahady lasa teo, teny amin’ny kianjan’Ankatso, ny fifaninanam-pirenena ho an’ny sokajy zandriny «Junior», eo amin’ny taranja tenisy. Saika voahaja avokoa ny lojika tamin’ity satria mbola voatazon’ireo mpilalao efa andrarezina ny anaram-boninahitra eo am-pelatanany. Anisan’ny nisongadina tamin’izany, i Tsantaniony Iariniaina, izay nanao pao-droa.
Norombahiny avokoa manko ny tompondaka teo amin’ny U16, izay nandavoany an-dRobinson Manuella, tamin’ny seta 2 noho 1 (4/6 ; 6/1 ; 7/5) sy ny teo amin’ny U18, izay nanilihany an-dRavoniandro Fitia, tamin’ny seta 2 noho 0 (6/3 ; 6/3)
Ankoatra izay, tsy mbola niala eo am-pelatanan-dRakotondramboa Miary Zo kosa ny tompondaka eo amin’ny U18 lehilahy, rehefa nandresy an-dRabarijaona Vahia, tamin’ny seta 2 noho 0 (6/0 ; 6/1). Afaka nanarina kosa nefa Vahia teo amin’ny U16 satria lasany ny fandresena rehefa nanilika an-dRanaivo Toky, tamin’ny seta 2 noho 0 izy.